Amaski ebusweni obunomdla yinto ebalulekileyo kuyo yonke intokazi. Ama-Masks anceda ukucoca ubuso, enze ulusu lobuso aze alinike zonke izondlo eziyimfuneko. Ulusu lobuso bowesifazane luphantsi kweemeko ezingathandekiyo kwaye alukhuselwanga. Siyabulela ukuba iifisi zethu zifumana zonke izondlo ezifunekayo kwaye ziphakamisa ithoni. Ubungcali bee-artists baqinisekile ukuba ngaphandle kobuso obuhle buso, akunakwenzeka ukwenza ukwenziwa kakuhle. Unokuya kunoma iyiphi i-salon okanye uthenge ukhilimu obizayo, kodwa nawe unako, ukwenza imaski ekhaya kwaye le mihla ayiyi kuba yimbi ngaphezu kweemaski ezithengiswa kwiivenkile, mhlawumbi zingcono. Ukuba unako ukukhetha ngokuchanekileyo imaski ebusweni bakho, unokubona umphumo walo omangalisayo. Emva kwakho konke, iimaski ezondla ekhaya zilungiselelwe kuphela kwimveliso yemvelo kwaye aziyi kubangela ukunyuka kwesikhumba.
Ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokwenza imaski, ubuso bakho kufuneka buhlambuluke nge gel ekhethekileyo okanye i-tonic, kodwa kukulungele ukwenza inkompe ye-steam. Eyona nto imnandi ihlambulula ilusu le-apula. Hlanganisa i-apple etyongwe kunye nekhofi yomhlaba kwaye usebenzise ebusweni ngokunyakaza okulula.
Ukuba isikhumba sakho sobuso somile, sinezinto ezinesondlo kunye nezondlo. Kuba ulusu lobuso lunokwenzeka ukwenza i-mask ye-oyile. Thatha ioyile yemifuno uze uyifudumele. Emva koko thabatha ingubo okanye ucoce iingubo uze uyityebe ngeoli. Yibambe ebusweni bakho malunga nemizuzu engama-20. Susa i-oyile eseleyo ibe yintambo ehlanjululwe ngamanzi afudumele. Kwaye emva koko, gxininisa ubuso bakho ngetayilisi ebomvu. Ubuso obunjalo buso buza kunika zonke izondlo ezilahlekileyo ebusweni bakho.
Ukuba unesikhumba sobuso obuqhelekileyo, uya kufuna iimifuno neziqhamo zeziqhamo. Ufuna i-yolk egciniweyo kunye ne-teaspoon yejusi esanda kuhluthwa. Konke lo mxube kwaye usebenzise ebusweni. Ukuhlamba le maski kuyimfuneko kumanzi okufudumala okuqala, kwaye emva kokubanda. Le maski isondla kakuhle kwaye ikhusela isikhumba ekuguga.
Ukuba isikhumba sakho somzimba sinamafutha kufuneka ucime ubuso obunamafutha kunye nokupenda ngaphambi kokuba ufake i-mask. Emva kokuba uhlambulule ubuso bakho, sebenzisa imaski. Ungalungisa imaski yobuso ekhaya. Udinga igramu ezili-10 zemvubelo ne-yogurt. Konke lo mxube uze ungeze kulo bunzima 1 ithisipuni yejusi ukusuka nawaphi na amajikijolo. Faka isicelo se-mask ukuya apho iiperra ezivaliwe kakhulu zikhona. Gcina imaski ebusweni bakho imizuzu eyi-15, uze uhlambe okokuqala ngamanzi afudumele kwaye emva kwamanzi abandayo. I-mask enjalo iya kunika isikhumba sesilwanyana kunye nokususa i-greasy.
Ngokwenza iimaski ezinomsoco ebusweni, unokugcina ubuhle nolutsha.
Ukunyamekela isikhumba ecaleni kwamehlo
Iimaski zokuphucula umbala ekhaya
Indlela yokuqinisa umkhuhlane womntu omdala?
Kutheni abantwana bekhala ngokubi?
IHoroscope 2010 ngonyaka, ibhinqa-ingonyama
Yintoni enokuyenza ukusweleka kweenwele kubafazi
Imbali yokubonakala kwekhofi
Kutheni uphupha umfana othanda ngempela?
Uboya bezinwele zakho
Izifo ezifihlakeleyo zomlomo womlomo